Iindaba zesiXhosa, 28 eyoMdumba 2019 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa, 28 eyoMdumba 2019
Written by Ashia Nkontsa on 28/02/2019
Indumezulu Gospel Show isondele
IZiko losasazo iZibonele fm ithi sele kulithuba efumaneka amatikiti engxikela yomculo wokholo yanyaka-nanyaka eququzelelwa leli ziko. Indumezulu Gospel Show kulindeleke ukuba isingathwe ngomhla weshumi elinesithathu kwinyanga kaTshazimpuzi kulo uphezulu nalapho ke owongamele icandelo lezoqeqesho,uphuhliso kwaneminyhadala eZibonele fm unkosazana Ntebaleng Shete athi nakulo unyaka baye baqinisekisa ukuba bafaka umxube ofanelekileyo wohlobo lomculo weGospel kananjalo nabefundisi abaphuma kwiimvaba ngeemvaba….OkaShete uthi abantu mabathobe amaxhala nanjengoko imiba yezokhuseleko nayo inikwe ingqwalasela.. Lo myhadala wokholo uzakubanjwa kwiTyalike iShekinah eLuzuko cebu kuhle eLower Crossroads. Ukanti kwixa elingaphambili ubufudula ubanjelwa kwiholo yoluntu i-O.R Tambo nethe yonakaliswa ngabahlali bakoRR, ababekuqhankqalazo begqushalazela ukufakelwa umbane kumatyotyombe abo akude kufuphi nale holo.
Baseluvuyweni abahlali base Stellenbosch
Baqhwatyelwe izandla abecuphi baseStellenbosch emva kokufunyanwa kwabarhanelwa benamatyala kwiziganeko ezintathu ezidumileyo zokugwintwa kwabantu. Impumelelo yakutshanje iqukunjelwe ngokugwetywa kukasomashishini wezindlu uJason Rohde owafunyanwa enetyala lokugqithis’amafu inkosikazi yakhe kwiindawo yeengcungcu ekwifama yomdiliya omfaxangiweyo eStelenbosch. Umene lo ugwetywe iminyaka engamashumi amani entolongweni. Abasemagunyeni kwinkonzo yesipolisa bathi babothulela umnqwazi abecuphi beli tyala. Ukanti isekwangabo nabathe basebenza kuvavanyo lwetyala lokubulawa kukaHannah Cornelius nalapho amadoda amathathu abandakanyekayo agwetye ubomi entolongweni kanjalo ikwangabo abaqhube uphando ngetyala lokuxatyelwa ngezembe kwamalungu osapho lakwaVan Breda kwindawo yeengcungcu iDe Zalze Estate ngo2015. UHenri van Breda unikwe izigwebo zobomi ezintathu kwityala lokubulala abazali bakhe nomntakwabo ndawonye neminyaka elishumi elinesihlanu ngokwenzakalisa udade wabo omncinane.
uPastor Mboro uphikisana novuso lomntu ekufeni
Inkokheli yebandla i-Incredible Happenings eyaziwa ngokuba nguMprofethi Paseka Mboro Motsoeneng kulindeleke ingqubanise iintloko nalowo waziwa njengoPastor Alph Lukau kulandela ibango lakhe lokuvusa umntu ekufeni. UMboro uthi ityelelo lakhe lelokungxolisa le nqeberhu ngokuhlazisa inkolo yobuKrestu. Mbombo zone zelizwe loMzantsi Afrika sele kuhanjwa kucelwa impunga ngodaba lwe-video ethe tshitshilili kumaqonga onxibelelwano ebonakalisa indoda engathi ivuswa ekufeni ingaphakathi kwibhokisi yokungcwaba. UMboro uthi akukho nkokheli yokwenene yezakwaLizwi esezingqondweni ngokupheleleyo engaphenjelelwa nguMoya woMdali ukuba yenze iqhinga elinje ngenxa yokuzungula udumo olukhawulezileyo. Ukanti kulindeleke ukuba nezinye iinkokheli zakwaLizwi zibe yinkxalenye yale ndibano kuquka nombutho wabahlali i-SANCO. Kusenjalo, kwanaye uMboro akanqabanga kwaphela kwizinto ezifingis’iintshiyi nezilaqazisayo.
Kusakhangelwa kufuniswa ngentwazana edukileyo uLinathi Titshala
Inqwanqwa lesipolisa ekuhlaleni eDelft kwakunye namanye amagunya-bantu athi azakuqhubeka nokuqinisa ngakumbi ukukhangela naphantsi kwezicithi intwazana edukileyo. ULinathi Titshala oneminyaka elithoba ubudala uduke embindini wenyanga yoMnga. Ophuma kwi-CPF umnumzana Charles George uthi nangonanje kungekho mkhomba-ndlela naziphumo zincumisayo, abasayi kulahla themba. Uthi bazakukhangela iveki yonke kwaye bafumana inkxaso emandla kwi-Ofisi kaSodolophu. Kusenjalo…Isadukile nanamhl’oku intwazana eneminyaka elishumi elinesibini yengingqi yaseLentegeur eMitchell’s Plain ukususela ngolwesihlanu weveki ephelileyo. Unkosikazi Dessie Rechner uthi kukho umrhano omkhulu wokuba uSandre Schoeman oduke eLentegeur useBonteheuwel. Iingxelo zithi ugqityelwe ukubonwa ngomhla wamashumi amabini anesibini kule iphezulu malunga nentsimbi yesibini emvakwemi esithi utyelela uninakhulu.
Intetho kaRamaphosa nabahlali baseKapa
Ungenelele umongameli weqela leANC umnumzana Matamela Cyril Ramaposa ekugxibheni kanobom abo ababiza njengeenkokheli zakwaLizwi zobuxoki ezingoneli nje kukuxhaphaza abantu abangatyhilekelwanga koko zirhuqela inkolo eludakeni. OkaRamaposa ebethetha edolophini eKapa kwindibano yakhe nabantu abatsha abazizifundiswa kwakunye namalungu okuhlala izolo. Uthi liyakhwankqisa ibango likaPastor Alph Lukau lokuvusa umntu ekufeni kwaye kubalulekile ukuba urhulumente neenkokheli zakwaLizwi ziqalise ukungqubanisa iintloko zicubungule indlela yokuqubisana nemiba ekumila kunje ngendlela eyakhayo.
nkokheli yeANC ibityelele umandla wase Khayelitsha ngenjikalanga yayizolo
njengenxalenye yokuhamba ikhuthaza abantu balomandla ukuba baVotele eli qela
ngemini yolonyulo olujongwe ngamehlo abomvu luninzi lwabemi belilizwe ukanti
ulonyulo lukazwelonke kulindeleke ukuba lubanjwe ngomhla wesibhozo kwinyanga
kaCanzibe. URamaposa ebethetha nabahlali bengingqi ezohlukeneyo ekuquka
ingingqi yo-TR ngethuba ehamba-hamba kwezingingqi , abahlali bathi banethemba
kubunkokheli baloka Ramaposa.
Kulindeleke Iingxelo zophando zika Robert McBride
Izakuqukunjelwa namhlanje inyewe ebangel’intetha malunga nesivumelwano sengqesho sentloko yegunyabantu lophando lamapolisa umnumzana Robert McBride. Ikomiti yepalamente kwimiba yesipolisa izakuqukumbela ingxelo yayo yokuba sihlaziywe kusini na isivumelwano sengqesho sikaMcBride ze emva koko inkundla ephakamileyo yaseGauteng ePitoli ive eli tyala. Izolo le komiti ichwetheze izimvo zayo neziphumo zophononongo kwaza kwavela nezimvo ezahlukene ngokwamaqela ezopolitiko njengoko bekunjalo kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo. I-ANC igxininise izityholo ezininzi ngakuMcBride kuquka uphando lomkhuseli woluntu kwakunye neziphumo zekomishoni yeenkonzo zoluntu zokungalandeli kwakhe imigaqo. Ukanti i-DA ithi ngaphandle nje kwezi ziphumo, ezinye nje izinto ezithethwayo ngale nqeberhu zizityholo nje ezingenani kwaye umnene lo unguzimele-geqe oyimfuneko kwi-IPID kananjalo inolwamvila phantsi kwesikhokelo sakhe.
Current Affairs, News and Actuality Programme.